[RASMI] dr.fone - taariikhqorihii Screen Android: Mirror iyo Record Android Device
dr.fone xidhmo - taariikhqorihii Screen Android
Mid ka mid click inay buugii oo ay u qoraan qalab Android aad.
Mirror qalab Android aad shaashadda computer aad wirelessly.
kulan Record, videos, iyo in ka badan.
Reply fariimaha app bulshada iyo fariimaha qoraalka ah oo ku saabsan PC.
Qaado shaashadda ah ee shaashadda Android si fudud.
Qor qalabka Android adiga oo isticmaalaya PC
Taageerada si ay u qoraan audio nidaamka of qalab aad u.
Mirror qalab aad ee tayada HD.
1 Click to Bilow
Bilow qoro si fudud oo dhaqso.
Taageer oo meelo kala duwan lagu qoro.
Enoy kulamada ugu caansan on shaashad weyn
Iyada oo taariikhqorihii Screen Android, aad ku raaxaysan karaan dhamaan kulamada waa weyn oo xiiso leh (sida royale Kulanka, kulanka beelaha, Pokemon ...) aad PC si fudud oo si habsami leh.
Buugii aad screen Android oo aan dib u dhac
No arrinta aad u baahan tahay in ay bandhig ganacsi ama eduation, function screen mirroring of Android taariikhqorihii Screen ka caawisaa yaab daawadayaasha kasta.
Qor aad screen Android khasaara 0 tayo leh.
Iyadoo mid ka mid click, aad u qoraan karaan content kasta live on qalab Android aad, iyada oo aan khasaaro kasta oo tayo leh.
videos HD Dhoofinta in aad computer
xidhmo dr.fone - taariikhqorihii Screen Android dhoofin karto videos HD si aad computer. Waxaa la badbaadiyey sida file MP4 oo aad la wadaagi karto in aad saaxiibadaa ama geliyaan si Youtube.
aad bay u leh dhammaan qalabka Androie shaqee
arrinta No aad isticmaalayso Samsung, Huawei, LG, HTC, Sony ama smartphone kale Android, taariikhqorihii Screen Android si buuxda u socon kara iyaga la.
Wireless Mirroring for Xaaladda kasta
Shaqee sidii borojektar ah in ay wadaagaan aad shaashadda telefoonka ee qol ay ka buuxaan dadka.
Qor iyo fasalka oo dhan la wadaagno meelaynta.
Ku raaxayso oo diiwaan kulan Android shaashad weyn.
Isticmaal Android casriga ah ee bandhigyo aad shaqada.
Soo bandhigo wax soo saarka iyo la abuuro bannaanbaxyo in waqtiga dhabta ah iyadoo ku maray.
Record dhan content live on your phone Android in tayada HD.
screen The Best Android mirroring iyo diiwaan-aragnimo!
Safe, si dhakhso ah, oo fudud.
Bilow diiwaan la mid click.
No halista in aad telefoon ama data.
Simple, dareen leh, geedi socodka.
Taariikhqorihii Screen Android taageertaa dhammaan qalabka Android heli karo suuqa. No arrinta aad leedahay Samsung, HTC, Sony, Motorola, Google Nexus, LG, ama ZTE, iwm iyo waxa version Android telefoonka waxaa socda, taariikhqorihii Screen Android kaa caawinaysaa in aad muraayad oo diiwaan shaashadda Android si fudud oo si habsami leh.
Maxaa la samayn karaa iyada oo taariikhqorihii Screen Android?
Taariikhqorihii Screen Android waa mirroring screen oo lagu qoro qalab sahlan oo wanaagsan qalabka Android. Waxaad ku qori karta screen Android la Loss Tayada Zero. Waxa kale oo ay taageeraan in ay qaataan screenshof aad screen Android, wareejiso files u dhexeeya computer iyo qalab Android
Sidee baad lacag taariikhqorihii Screen Android?
Waxaan ku siin laba nooc oo ah liisanka waayo Android taariikhqorihii Screen, kuwaas oo License Hal Sano iyo License Lifetime.
Maxay tahay in aan is ogow marka aan u qoraan Screen Android?
Fadlan aan laga noqon ha off shaashadda telefoonka ama la bedelo wax kasta oo goobaha telefoonka inta lagu guda jiro geeddi-socodka lagu qoro.
Xaggee video lagu duubay ku badbaado?
vidoe lagu duubay ayaa la badbaadiyey in C: Users \_ \_ Desktop admin \_ by default. Waxaad sidoo kale riixi kartaa Settings Record Settings on taariikhqorihii Screen Android si ay u baddasho goobta lagu badbaadiyo.
waxaa si fudud
Taariikhqorihii Screen Android waa ku weyn yahay. Waxaan marna ma ogaan qoro shaashadda android noqon kartaa si sahlan.
i jecel taariikhqorihii screen android
taariikhqorihii screen android waa fududahay in la fahmo. video lagu duubay waa HD dhabta ah. kooxda mahad badan.
Waan jeclahay function muraayada. waxa ay taasi ii soo bandhigayay si fiican u socdaan.
Top 10 rikoorrada Screen Game Best for Android
Top 5 taariikhqorihii Screen Android for Phone Android
Sidee loo Isticmaalaa Android taariikhqorihii Screen Iyadoo Audio
Sida loo Qor Screen Android On PC
5 Best Free Android Voice for taariikhqorihii Phone Android
Top 5 Best Video taariikhqorihii for Phone Android